အိမ်ဆောက်နေတုန်းမှာ အုတ်ခဲတွေ လာတောင်းရင် မပေးလိုက်ပါနဲ့ – Shwe Myanmar
Posted on January 14, 2021 January 14, 2021 by Shwe Myanmar
ကျွန်တော့်ကားပျက်သွားလို့ ကားပြင်ဖို့ ဝပ်ရှော့ကို ပို့ထားလိုက်ရတယ်။ ဒါကြောင့် မြို့ပတ်ရထားစီးပြီး အလုပ်သွားဖို့ အိမ်နဲ့ သိပ်မဝေးတဲ့ ဘူတာရုံကို လမ်းလျှောက်သွားလိုက်တယ်။ ဘူတာရောက်တော့ ရထားလာဖို့ စောင့်နေတုန်း
ဘူတာရုံပလက်ဖေါင်းပေါ်မှာ ခွက်လေးတစ်လုံး ရှေ့ချပြီး ငုတ်တုပ်လေး ထိုင်နေတဲ့ အသက် ၅၀ အရွယ် လူကြီးတစ်ယောက်ကို သတိထားမိလိုက်ပါတယ် … ။ သူဟာ အဝတ်အစား နွမ်းနွမ်းပါးပါးကို ဝတ်ထားတယ်။ သူ့မျက်နှာမှာ
ထမင်းအလွန်ဆာနေပုံ ပေါ်နေတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့ရုပ်ရည်ဟာ သန့်ပြန့်လို့ သူတောင်းစားတစ်ယောက် မဟုတ်လောက်ဘူးလို့ ကျွန်တော်တွက်မိတယ်။ ကျွန်တော်လည်း သူ့ကို သနားတာနဲ့ ဘူတာရုံဘေးက ထမင်းတစ်ထုတ်ဝယ်ပြီး
သူ့ဆီ သွားပေးလိုက်တယ်။ ဒီအချိန်မှာ ရထားဝင်လာလို့ သူ့ကို စကားမပြောနိုင်ဘဲ လက်ထဲက ထမင်းထုတ်ကို ပေးပြီး ရထားပေါ် အမြန်တက်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော် လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ သူဟာ ကျွန်တော့်ကို အလွန်ကျေးဇူးတင်တဲ့
မျက်နှာနဲ့ လှမ်းကြည့်နေတာကို မြင်လိုက်ရတယ်။ ကျွန်တော် သူ့အကြောင်းကို စဉ်းစားရင်း ညက တော်တော်နဲ့ အိပ်မရဘူး။ ဒီလူဟာ သူတောင်းစား မဟုတ်နိုင်ဘူး။ သူ့ရုပ်ရည်ကြည့်ရတာ အရင်က ချမ်းသာခဲ့တဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်တယ်၊
သူ အခု ဘာကြောင့် တောင်းစားနေရတာလဲဆိုတာကို သိချင်နေတယ်။ နောက်နေ့မှာ ကျွန်တော်ဟာ ပုံမှန်အလုပ်သွားချိန်ထက်စောပြီး အိမ်က ထွက်ခဲ့တယ်။ အရင်နေ့က တွေ့ခဲ့တဲ့ အဲဒီလူကြီးနဲ့ စကားပြောချင်လို့ပါ။ သူ့ကို အရင်နေရာမှာပဲ
ခွက်တစ်လုံးရှေ့ချပြီး ထိုင်နေတာကို တွေ့ရပြန်တယ်။ ကျွန်တော် အရင်ရက်ကလိုပဲ ထမင်းတစ်ထုတ် အမြန်ဝယ်ပြီး သူ့ဆီသွားလိုက်တယ်။ သူ့ကို ထမင်းထုတ်ပေးရင်း ကျွန်တော်သိချင်တာကို မေးမြန်းကြည့်လိုက်တယ်။
“ဟင် ဒါဆို အခု ဘာဖြစ်လို့ ဆင်းရဲသွားရတာလဲဗျ။ ဦးလေးဟာ ရှိတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို လောင်းကစားလုပ်ပြီး ကုန်သွားလို့လား၊ စီးပွားရေးလုပ်တာ ရှုံးသွားလို့လား။ သားသမီးတွေ နှိပ်စက်လိုက်လို့လား” “မင်း ပြောတာတွေ တစ်ခုမှ
မဟုတ်ပါဘူးကွယ်” “ဒါဆို ဦးလေး ဘာဖြစ်လို့ ဒီဘဝရောက်နေခဲ့ရတာလဲဗျ” “ငါ လူတွေကို စိတ်ချမ်းသာစေချင်လို့ ဒီဘဝရောက်လာရတာပါ” “ဗျာ၊ လူတွေကို စိတ်ချမ်းသာစေချင်လို့ ဒီဘဝရောက်လာရတယ် ဟုတ်လား။ ကျွန်တော် နားမလည်လို့ ရှင်းပြပေးပါလား”
လူကြီးက ဆွေးမြေ့တဲ့ လေသံနဲ့ ခုလို ရှင်းပြပါတယ်။ “ငါဟာ အရင်က အတော်လေး ချမ်းသာခဲ့တယ်။ အိမ်ထောင်မရှိ လူပျိုကြီးတစ်ယောက်ပါ။ ငါ့မှာ ကောင်းတဲ့ အကျင့်လို့ ပြောရမလား၊ မကောင်းတဲ့ အကျင့်လို့ ပြောရမလား မသိဘူး။
ငါဟာ ငွေကြေးအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ လူတွေ ငါ့ဆီလာပြီး အကူအညီတောင်းရင် ငါ ဘယ်တော့မှ မငြင်းဘူး။ သူတို့လိုသလောက် ပိုက်ဆံတွေ ပေးပြီး ကူညီတယ်။ ငါဟာ အမြဲကူညီတတ်တယ်ဆိုတာ ကြားတော့ အကူအညီတောင်းသူတွေလည်း
အတော်များလာတယ်။ ငါ ပိုက်ဆံပေးလိုက်လို့ သူတို့ပျော်သွားတာကို မြင်ရင် ငါလည်း စိတ်ချမ်းသာတယ်။ ဒါပေမဲ့ ငါ့ပိုက်ဆံတွေကလည်း အပေးပဲရှိပြီး အရမရှိတော့ နောက်ဆုံး ကုန်သွားတာပေါ့ကွာ။ ငါလည်း ပိုက်ဆံမရှိတော့ ရှိတဲ့ ပစ္စည်းတွေနဲ့
အိမ်ကို ရောင်းပြီး စားသောက်ရတယ်။ နောက်ဆုံး စားစရာမရှိတော့ ခုလို လမ်းဘေးရောက်လာတာပေါ့ကွာ” “ဦးလေး၊ ခုလို ဖြစ်တဲ့အတွက် နောင်တမရဘူးလား” “မရပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတာ တစ်ခုရှိတယ်” “ဘာကို စိတ်မကောင်း ဖြစ်တာလဲ ဦးလေး”
မင်း အိမ်တစ်လုံး ဆောက်ပြီး နေစရာမရှိသူတွေကို လာနေခိုင်းလိုက်ပါ။ ဒါပေမဲ့ မင်းအိမ်ဆောက်နေတုန်းမှာ အုတ်ခဲတွေ လာတောင်းရင် မပေးလိုက်ပါနဲ့။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ မင်းမှာ အုတ်ခဲမရှိတော့လို့ အိမ်မဆောက်နိုင်ရင်
မင်းမှာ နေစရာ မရှိဖြစ်သွားမယ်” ကျွန်တော်လည်း ရထားဝင်လာလို့ ရထားပေါ် အမြန်ပြေးတက်လိုက်တယ်။ လူကြီးရဲ့ စကားကို နားထဲမှာ ကြားယောင်ရင်း ခုလို စဉ်းစားနေမိတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ အကူအညီလိုအပ်နေသူတွေကို
ကူညီတယ်ဆိုတာ အလွန်မွန်မြတ်တဲ့ အလုပ်ပါ။ ဒါပေမဲ့ ကူညီရင်း ကူညီရင်းနဲ့ မိမိကိုယ်တိုင်မွဲသွားရင်လည်း မဟုတ်သေးပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကူညီရင်းနဲ့ မမွဲအောင် မိမိကိုယ်ကို ပြည့်စုံတဲ့ ကြီးပွားချမ်းသာသူတစ်ယောက် အရင် ဖြစ်အောင် လုပ်သင့်တယ်။
အခု ဘီလ်ဂိတ်၊ မာ့ခ်ဇူကာဘတ်တို့လို့ ကမ္ဘာမှာ အချမ်းသာဆုံး ဘီလျံနာသူဌေးကြီးတွေ ဖြစ်လာပြီး ဒေါ်လာ ဘီလျံနာပေါင်းများစွာကို လှူတန်းပေးနေသလိုပေါ့။ ဒီလိုမှ မဟုတ်ဘဲ ဝေသန္တရာမင်းကြီးလို ဆင်ဖြူတော်ပါမချန်
စည်းစိမ်ပြုတ် လှူတန်းနိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့ဗျာ။ အင်တာနက်မှာ ဖတ်ရတဲ့ A limit of your kindness ဆောင်းပါးလေးကို မှီငြမ်းရေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် …. ။
Source – ဗန်းမော်သိန်းဖေ
ကြှနျတေျာ့ကားပကျြသှားလို့ ကားပွငျဖို့ ဝပျရှော့ကို ပို့ထားလိုကျရတယျ။ ဒါကွောငျ့ မွို့ပတျရထားစီးပွီး အလုပျသှားဖို့ အိမျနဲ့ သိပျမဝေးတဲ့ ဘူတာရုံကို လမျးလြှောကျသှားလိုကျတယျ။ ဘူတာရောကျတော့ ရထားလာဖို့ စောငျ့နတေုနျး ဘူတာရုံပလကျဖေါငျးပျေါမှာ
ခှကျလေးတဈလုံး ရှခေ့ပြွီး ငုတျတုပျလေး ထိုငျနတေဲ့ အသကျ ၅၀ အရှယျ လူကွီးတဈယောကျကို သတိထားမိလိုကျပါတယျ … ။ သူဟာ အဝတျအစား နှမျးနှမျးပါးပါးကို ဝတျထားတယျ။ သူ့မကျြနှာမှာ ထမငျးအလှနျဆာနပေုံ ပျေါနတေယျ။ ဒါပမေဲ့ သူ့ရုပျရညျဟာ
သနျ့ပွနျ့လို့ သူတောငျးစားတဈယောကျ မဟုတျလောကျဘူးလို့ ကြှနျတျောတှကျမိတယျ။ ကြှနျတျောလညျး သူ့ကို သနားတာနဲ့ ဘူတာရုံဘေးက ထမငျးတဈထုတျဝယျပွီး သူ့ဆီ သှားပေးလိုကျတယျ။ ဒီအခြိနျမှာ ရထားဝငျလာလို့ သူ့ကို စကားမပွောနိုငျဘဲ လကျထဲက
ထမငျးထုတျကို ပေးပွီး ရထားပျေါ အမွနျတကျလိုကျတယျ။ ကြှနျတျော လှမျးကွညျ့လိုကျတော့ သူဟာ ကြှနျတေျာ့ကို အလှနျကြေးဇူးတငျတဲ့ မကျြနှာနဲ့ လှမျးကွညျ့နတောကို မွငျလိုကျရတယျ။ ကြှနျတျော သူ့အကွောငျးကို စဉျးစားရငျး ညက တျောတျောနဲ့ အိပျမရဘူး။
ဒီလူဟာ သူတောငျးစား မဟုတျနိုငျဘူး။ သူ့ရုပျရညျကွညျ့ရတာ အရငျက ခမျြးသာခဲ့တဲ့ လူတဈယောကျဖွဈနိုငျတယျ၊ သူ အခု ဘာကွောငျ့ တောငျးစားနရေတာလဲဆိုတာကို သိခငျြနတေယျ။ နောကျနမှေ့ာ ကြှနျတျောဟာ ပုံမှနျအလုပျသှားခြိနျထကျစောပွီး အိမျက ထှကျခဲ့တယျ။
အရငျနကေ့ တှခေဲ့တဲ့ အဲဒီလူကွီးနဲ့ စကားပွောခငျြလို့ပါ။ သူ့ကို အရငျနရောမှာပဲ ခှကျတဈလုံးရှခေ့ပြွီး ထိုငျနတောကို တှရေ့ပွနျတယျ။ ကြှနျတျော အရငျရကျကလိုပဲ ထမငျးတဈထုတျ အမွနျဝယျပွီး သူ့ဆီသှားလိုကျတယျ။
သူ့ကို ထမငျးထုတျပေးရငျး ကြှနျတျောသိခငျြတာကို မေးမွနျးကွညျ့လိုကျတယျ။ “ဦးလေးကို ကွညျ့ရတာ အရငျက ခမျြးသာခဲ့တဲ့ လူတဈယောကျဖွဈခဲ့မယျလို့ ကြှနျတျော ထငျပါတယျ။ အဲဒါ မှနျရဲ့လား ခငျဗြ”
“ဟငျ ဒါဆို အခု ဘာဖွဈလို့ ဆငျးရဲသှားရတာလဲဗြ။ ဦးလေးဟာ ရှိတဲ့ ပစ်စညျးတှကေို လောငျးကစားလုပျပွီး ကုနျသှားလို့လား၊ စီးပှားရေးလုပျတာ ရှုံးသှားလို့လား။ သားသမီးတှေ နှိပျစကျလိုကျလို့လား” “မငျး ပွောတာတှေ တဈခုမှ မဟုတျပါဘူးကှယျ” “ဒါဆို ဦးလေး
ဘာဖွဈလို့ ဒီဘဝရောကျနခေဲ့ရတာလဲဗြ” “ငါ လူတှကေို စိတျခမျြးသာစခေငျြလို့ ဒီဘဝရောကျလာရတာပါ” “ဗြာ၊ လူတှကေို စိတျခမျြးသာစခေငျြလို့ ဒီဘဝရောကျလာရတယျ ဟုတျလား။ ကြှနျတျော နားမလညျလို့ ရှငျးပွပေးပါလား” လူကွီးက ဆှေးမွတေဲ့ လသေံနဲ့ ခုလို ရှငျးပွပါတယျ။
“ငါဟာ အရငျက အတျောလေး ခမျြးသာခဲ့တယျ။ အိမျထောငျမရှိ လူပြိုကွီးတဈယောကျပါ။ ငါ့မှာ ကောငျးတဲ့ အကငျြ့လို့ ပွောရမလား၊ မကောငျးတဲ့ အကငျြ့လို့ ပွောရမလား မသိဘူး။ ငါဟာ ငှကွေေးအခကျအခဲဖွဈနတေဲ့ လူတှေ ငါ့ဆီလာပွီး အကူအညီတောငျးရငျ ငါ ဘယျတော့မှ မငွငျးဘူး။
သူတို့လိုသလောကျ ပိုကျဆံတှေ ပေးပွီး ကူညီတယျ။ ငါဟာ အမွဲကူညီတတျတယျဆိုတာ ကွားတော့ အကူအညီတောငျးသူတှလေညျး အတျောမြားလာတယျ။ ငါ ပိုကျဆံပေးလိုကျလို့ သူတို့ပြျောသှားတာကို မွငျရငျ ငါလညျး စိတျခမျြးသာတယျ။ ဒါပမေဲ့ ငါ့ပိုကျဆံတှကေလညျး အပေးပဲရှိပွီး
အရမရှိတော့ နောကျဆုံး ကုနျသှားတာပေါ့ကှာ။ ငါလညျး ပိုကျဆံမရှိတော့ ရှိတဲ့ ပစ်စညျးတှနေဲ့ အိမျကို ရောငျးပွီး စားသောကျရတယျ။ နောကျဆုံး စားစရာမရှိတော့ ခုလို လမျးဘေးရောကျလာတာပေါ့ကှာ” “ဦးလေး၊ ခုလို ဖွဈတဲ့အတှကျ နောငျတမရဘူးလား” “မရပါဘူး။
ဒါပမေဲ့ စိတျမကောငျးဖွဈမိတာ တဈခုရှိတယျ” “ဘာကို စိတျမကောငျး ဖွဈတာလဲ ဦးလေး” “အေးကှာ၊ ငါ လူတှကေို သနားလို့ ငါ့ကိုယျမှာ ဝတျထားတဲ့ အကငြ်္ီကို ခြှတျပွီး ပေးလိုကျတယျ။ ငါ လိုအပျနတေဲ့ အခြိနျမှာ အကငြ်္ီလကျလေးတဈဖကျကိုတောငျ မပေးကွဘူးကှာ။
ငါ့အတှအေ့ကွုံကနေ မငျးကို အကွံတဈခု ပေးမယျကှာ။ မငျး အိမျတဈလုံး ဆောကျပွီး နစေရာမရှိသူတှကေို လာနခေိုငျးလိုကျပါ။ ဒါပမေဲ့ မငျးအိမျဆောကျနတေုနျးမှာ အုတျခဲတှေ လာတောငျးရငျ မပေးလိုကျပါနဲ့။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ မငျးမှာ အုတျခဲမရှိတော့လို့ အိမျမဆောကျနိုငျရငျ
မငျးမှာ နစေရာ မရှိဖွဈသှားမယျ” ကြှနျတျောလညျး ရထားဝငျလာလို့ ရထားပျေါ အမွနျပွေးတကျလိုကျတယျ။ လူကွီးရဲ့ စကားကို နားထဲမှာ ကွားယောငျရငျး ခုလို စဉျးစားနမေိတယျ။ ဟုတျပါတယျ။ အကူအညီလိုအပျနသေူတှကေို ကူညီတယျဆိုတာ အလှနျမှနျမွတျတဲ့ အလုပျပါ။
ဒါပမေဲ့ ကူညီရငျး ကူညီရငျးနဲ့ မိမိကိုယျတိုငျမှဲသှားရငျလညျး မဟုတျသေးပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ ကူညီရငျးနဲ့ မမှဲအောငျ မိမိကိုယျကို ပွညျ့စုံတဲ့ ကွီးပှားခမျြးသာသူတဈယောကျ အရငျ ဖွဈအောငျ လုပျသငျ့တယျ။ အခု ဘီလျဂိတျ၊ မာ့ချဇူကာဘတျတို့လို့ ကမ်ဘာမှာ အခမျြးသာဆုံး
ဘီလြံနာသူဌေးကွီးတှေ ဖွဈလာပွီး ဒျေါလာ ဘီလြံနာပေါငျးမြားစှာကို လှူတနျးပေးနသေလိုပေါ့။ ဒီလိုမှ မဟုတျဘဲ ဝသေန်တရာမငျးကွီးလို ဆငျဖွူတျောပါမခနျြ စညျးစိမျပွုတျ လှူတနျးနိုငျရငျတော့ အကောငျးဆုံးပေါ့ဗြာ။ အငျတာနကျမှာ ဖတျရတဲ့ A limit of your kindness ဆောငျးပါးလေးကို မှီငွမျးရေးထားတာပဲဖွဈပါတယျ …. ။
Source – ဗနျးမျောသိနျးဖေ
Previous PostPrevious မြွေပုံကြီးထဲကနေ မြွေတွေကို သွားဆွဲထုတ်ရဲတဲ့ ကလေးလေးရဲ့ အသည်းယားဖွယ်ဗီဒီယို
Next PostNext ကြီးမားလွန်းတဲ့ Mammothသိုးကောင်ရဲ့အရိုးစုကို သူ့မြေကွက်မှာ အမှတ်မထင် တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ လယ်သမားတစ်ဦး(ရုပ်သံ)